Dhalooyinka Naqshadaynta Qaaska ah, Dhalooyinka Vodka, Dhalooyinka Whiskey - Chengfeng
Dhalooyinka Naqshadaynta Qaaska ah
Dhalooyinka Amarka Yar
Muraayadaha is biirsaday
Muraayadaheena muraayadaha ahi waxay gacan ka geystaan ​​nolol nadiif ah oo nadiif ah!
Safarka shiraaca dabaysha, midnimada iyo horumarka, xaqnimada iyo ka wada faa'iideysiga, mas'uuliyadda-qaadashada!
Si aad u noqotid tijaabada wershadaha ee dhexdhexaadinta qalabka muraayadaha dhamaadka-sare, si aad ugu bedesho is-beddelka shakhsi ahaaneed, iyo inaan ka dhigno noocyadeena kuwo aad u qiimo badan!
Dhaladaha dhalada sare
Dhalada Dhalada ah ee Liibiya
Waxaan diirada saareynaa qaabeynta iyo soosaarida nooc kasta oo dhalooyinka aalkolada dhalada ah iyadoo loo eegayo baahidaada oo faahfaahsan. Qiyaasta dhalada khamriga oo ka kooban dhalooyinka aalkolada yar yar ee 50ml ilaa 1.5L, iyo kala doorashada inta udhaxeysa koofiyadda, korka fur, iyo futada, waxay ka dhigan tahay inaad u habeyn karto dhalo khamri dhalo u gaar ah oo noocaaga ah oo leh amar yar.
750ml Dhalo Laba-Wall khamriga Glass
Qurxinta toogashada, qaadashada, daabacaadda shaashadda xariirta, xoqitaanka, ciideynta, xardhashada, midabka dusha, qaboojinta dhalada, pate-surpate, dulmar ku saabsan ku buufinta dahabiga iyo glaze.
300ml Khamriga Khamriga
Muraayada Khamriga ee Stemless Aerating Wine Glass waxay u keentaa shaqeynta qaab guud oo ku saabsan naqshadeynta muraayadda khamriga. Si dhammaystiran loo farsameeyay, markabkan shatiga leh wuxuu si dhab ah u qaas u yahay hab quruxsan oo lagu cabbiri karo khamrigaaga ama ruuxyada. Si toos ah ugu shub qolka unuga ee ku xardhan bartamaha muraayadda. Khamrigu wuu dhex mari doonaa, taas oo keeneysa 7oz oo khamri aerared ah oo diyaar u ah inuu ka farxiyo santuuqaaga. U adeegso baloog baraf ah hawo-qaboojiyaha si aad u qaboojiso khamri cad, whiskey, ama cognac marka ay dhexdhexaad yihiin. Mashiinka weelka lagu dhaqo oo aamin ah.
Guangzhou ChengFeng Brothers Industrial Company Limited waa shirkad hal abuur leh oo ku takhasustay soo saarista, qaabeynta iyo cilmi baarista muraayadaha dhamaadka-sare. Noocyada wax soo saarkayagu waxaa ka mid ah muusikada hadiyado dhiirrigelinta ah ee khamriga, dhalooyinka galaaska nooca khamriga, dhalooyinka biyaha galaaska ah, dhalooyinka cuntada galaaska ah, iyo waxyaabaha kale ee muraayadda u dhigma.
Shirkaddayadu waxay ku taal Guangzhou Shiinaha, oo leh taraafikada habboon iyo saadka degdegga ah, waxaad kala dooran kartaa tareenka, hawada, weelka badda iyo gaadiidka dhulka. Goobtayadu waxay u dhowdahay dekadaha Huangpu iyo Nansha, badeecadaha waxaa loo qaadi karaa meelo adduunka oo dhan ah konteynarro. Waxaan ku dadaaleynaa inaan abuurno noocyo caalami ah oo casri ah warshadaha muraayadaha dhamaadka-sare oo wata koox xirfadlayaal ah, maamul awood leh iyo qalabka hormarinta warshadaha.
Fadlan la soo xiriir si aad u dalbato!
Lambarka 1, Jiuji Street, Caotang Village, Nancun Town, Panyu, Guangzhou, Guangdong, Shiinaha
Midabada dhalada dhalada ah